Akụkọ - Gịnị bụ SWL na SF maka FIBC
Kedu ihe bụ SWL na SF maka FIBC
Ndị mmadụ kwesịrị iji nnukwu mmerụ ahụ arụ ọrụ. Mmerụ ahụ na ọrịa ndị ọrụ na-anaghị egbu egbu na-eme kwa ụbọchị n'ụwa niile. Ọ dabara nke ọma, na ụlọ ọrụ na -eji FIBC, nke a makwaara dị ka nnukwu akpa, nnukwu akpa nwere ezigbo SWL na -enyere aka belata ọnụego mmerụ ahụ n'ebe ọrụ.
SWL (ibu ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma) nke FIBC bụ ikike nchekwa kacha kacha mma. Dịka ọmụmaatụ, 1000kgs nke SWL pụtara ikike ibu kacha dị nchebe bụ 1000kgs.
SF (ihe nchekwa) nke FIBC na -abụkarị 5: 1 ma ọ bụ ọbụna 6: 1. Karịsịa maka nnukwu akpa UN, SF nke 5: 1 bụ otu n'ime ọnọdụ dị mkpa.
Ndị nrụpụta na -anwale nnwale nnwale kacha elu iji chọpụta SF. N'oge ule ibu kachasị, nnukwu akpa nwere SF nke 5: 1 ga -ejigide n'okpuru SWL ugboro ise ka ọ gafesịrị usoro 30 nke ugboro abụọ SWL. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na SWL bụ 1000kgs, nnukwu akpa ga -agafe ule ahụ naanị ma ọ bụrụ na ọ nwere ike jigide nrụgide 5000kgs, wee na -anwale ule cyclic na 2000kgs nke nrụgide ugboro 30.
Ka ọ dị ugbu a, nnukwu akpa nwere 6: 1 nke SF siri ike karị. Ọ ga -enwerịrị ike ijide SWL ugboro 6 mgbe ọ gafesịrị 70 okirikiri nke ugboro 3 SWL. N'ọnọdụ a, ọ bụrụ na SWL bụkwa 1000kgs, nnukwu akpa ga -agafe ule ahụ mgbe ejiri ruo 6000kgs nrụgide, wee na -anwale ule cyclic na 3000kgs nke nrụgide ugboro 70.
SWL bụ akụkụ dị mkpa iji mepụta ebe ọrụ na-enweghị nsogbu. Ekwesịrị ịmara na ndị ọrụ ga -enwerịrị irube isi na SWL n'oge ọrụ gụnyere njuputa, ịtọpụ, njem na ụlọ ahịa.
Akụ Fibc Akụkụ, Pp akpa Fibc, Nkwakọ ngwaahịa Fibc, Ụdị akpa Fibc, Akpa Jumbo Fibc, Nnukwu akpa Fibc,